के हो पर्सनालिटी ए ? यस्ता ब्यक्तिलाई हुन्छ हृदयघातको खतरा – Sunaulo Nepal TV
एजेन्सी । अभिनेता सिद्धार्थ शुक्लाको अचानक निधनले बलिउड अहिले पनि शोकमा छ । उनको विहिवार हृदयघाटका कारण निधन भयो । उनको अचानक निधनसंगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा वहस सुरु भएको छ । चिकित्सक र विज्ञहरुले पर्सनालिटी ए भएका ब्यक्तिमा यस्तो खतरा हुने बताएका छन् । के हो पर्सनालिटी ए ?
सिद्धार्थ ४० वर्षका फिट र स्वस्थ्य देखिन्थे । तर अचानक भएको उनको निधन विश्वास गर्न कठिन छ । धेरैले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । उनको निधनसंगै हृदयघातका लागि डाक्टर र स्वास्थ्य विज्ञले जीवनशैलीसँग सम्बन्धी विभिन्न सल्लाह दिइरहेका छन् । दिल्लीको फोर्टिस अस्पतालका डाक्टर तपन घोषले हृदयघात र पर्सनालिटी एबीच एक विशेष स म्ब न्ध भएको बताएका छन् ।
डाक्टर तपन घोषले भने, ‘टाइप एक पर्सनालिटी हुनु जस्तै कक्षामा पहिलो हुनु । सबैलाई थाहा छ कि सिद्धार्थ बिग बसका विनर हुन् र उनको व्यक्तित्व निकै बलियो थियो । उनी सधैं पहिलो हुन चाहन्थे । यस्ता मानिसहरुलाई टाइप ए पर्सनालिटी भनिन्छ र उनीहरुमा हृदयघातको जोखिम बढी हुन्छ ।’ सिद्धार्थ पनि त्यस्तै दवावमा थिए । उनी आफुलाई फिट राख्न निकै प्रयत्न गर्थे । उनी दिनमा २ घण्टा वर्कआउट गर्थे ।
यसमा बिरामीको १ घण्टाभित्र नै मृत्यु हुन्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो कारण कोरोनरी आर्टरी डिजिज हो । २० प्रतिशत व्यक्तिमा यस्तो हुन्छ । खराब जीवनशैली हो ।
डाक्टर तपन घोषले भने, ‘जो मानिस ६ घण्टाभन्दा कम वा ९ घण्टाभन्दा बढी सुत्छन्, उनीहरुमा पनि यस्तो प्रकारको रोग देखिन्छ । ठूला शहरमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको घर ढिला गरी फर्कनु । मानिसहरु साढे ८, ९ बजे अफिसबाट फर्कन्छन्, खाना खान्छन् र त्यसपछि सुतिहाल्छन् ।
त्यसपछि बिहान छिटो उठेर अफिसका लागि तयार हुन्छन् । यो जीवनशैली सही होइन । यो मृत्युको एउटा निकै ठूलो कारण हो जुन परिवर्तन गर्नुपर्छ । ’ निद्रा कम, व्यायाम नगर्नु र डाइटमा एन्टिअक्सिडेन्ट नहुनुले पनि मुटुरोगलाई बढाइरहेको हुन्छ ।
Previous तिम्रो बच्चा को बाउ को हो ? भन्नेहरुलाई कांग्रेसकि संसद नुसरतले दिइन् यस्तो कडा जवाफ
Next जे बर मागे पनि पुग्ने ! दर्शनको लागी पुग्नै पर्ने शिवको मन्दिर एक सेयर गर्नुहोस।